Ukutshintsha kwesimo kwiNtengiso yeKhontenti ye-B2B (eneenkcukacha-manani) | Martech Zone
Ukutshintsha kwesimo kwiNtengiso yeKhontenti ye-B2B (eneenkcukacha-manani)
NgoLwesibini, Agasti 25, 2015 NgoLwesibini, Agasti 25, 2015 Douglas Karr
Iqela lezoQoqosho lenze uvavanyo olunzulu kunye nohlalutyo lwesimo sengqondo se-B2B kwaye yavelisa le infographic ngeziphumo. Ngombuzo ngamnye, kukho uthelekiso lwamagqala eshishini xa kuthelekiswa nesizukulwana esilandelayo sabathengi beshishini. Kuyathakazelisa ukubona umsantsa obalulekileyo phakathi kwezi zimbini.
Ukujonga izithuba, kukho umahluko onomdla
Amagqala eshishini afumana Iingxelo zophando Uncedo ngakumbi ngokubetha ama-35%!
Amagqala eshishini, ngama-26%, achitha ubuncinci iiyure ezine ngeveki efunda Umxholo weshishini.
Amagqala eshishini angama-25% amathuba okuba afumane whitepapers iluncedo ngakumbi.
Amagqala eshishini angama-23% amathuba okuba acinywe ngumxholo ovakala ngathi inqanaba lokuthengisa.
Amagqala eshishini angama-22% amathuba okuba akhethe umxholo ngohlobo lwe amanqaku.
Mhlawumbi ayothusi into yokuba abantu abancinci beshishini bathande umxholo wevidiyo (nge-9%) kuneli gqala lishishini. Obu bungqina buninzi ngakumbi kuluhlu olungenasiphelo lweehambo zabathengi abacela umngeni kuzo.
Cofa ukuze uvule ubungakanani obupheleleyo
tags: b2bUmxholo we-b2bamagqala oshishinoUkuThengiswa kweMpahlaoosomashishini abancinci